Maitiro ekuziva iro bhatiri reti maAirPod ako kubva kuApple Watch | Ndinobva mac
Maitiro ekuziva iro bhatiri reti maAirPod ako kubva kuApple Watch
Pedro Rodas | | dzakawanda
Rimwezve zuva isu tichataura nezve chigadzirwa chitsva kubva kuCupertino, iyo inoshamisa AirPods. Chekutanga pane zvese, isu tinoda kujekesa kuti kana isu tichitaura nezve idzi nyowani mahedhifoni eApple, hatireve kuti ndiwo akanakisa sarudzo pamusika kana kuti vane dhizaini inokodzera marudzi ese evanhu, kunyangwe kuravira kwangu vanotevedzera zvese zvandinokumbira.
Kune vateveri vazhinji vanotsoropodza nzira yavanayo, iyo yakafanana chaizvo neEarPods, sezvo dzisingakwani nzeve dzevanhu vazhinji. Ichokwadi kuti haina kukodzera mhando dzese dzevashandisi, asi hachisi chikonzero chekutaura kuti havazi sarudzo yakanaka pachikonzero ichocho ... A Ferrari haisi yevanhu vese uye nekudaro haisi mota dzakaipa .. .. hehehe
Nhasi zvatiri kuda kukutsanangurira maitiro ekutarisa bhatiri iro rako AirPods pane yako Apple Watch. Sezvaungave uchitoziva, AirPods inouya mune imwe nyaya iri bhatiri iyo inokutendera iwe kuti udzorezve inguva yakatarwa yemaawa makumi maviri nemana ekushandisa. Bhatiri rine iyo AirPods idiki kwazvo asi kunyangwe zvakadaro, yekutanga kubhadharisa kwese kubviswa kubva mune iyi kesi kunopa anosvika maawa mashanu ekushandisa.
Zvakanaka, kuti ukwanise kuona bhatiri rakasiiwa neAirPod yako unogona kuzviita zvakasiyana zvichienderana nechishandiso chauri kudzishandisa. Pane Mac unogona kuona bhatiri ravasiya nekungodzvanya pa icon ye Makaralı> AirPods. Iwe uchaona kuti kudonha-pasi kunoonekwa mune Iyo inokuratidza iwe chaji iyo yega yega mahedhifoni uye kesi yacho.
Nekudaro, kana iri yako Apple Watch uye kwete yako iPhone yauri kutakura newe, unogona zvakare kuona kuti imarii yakasara yasara sekureba sekureba ita maAirPod abatanidzwe newachi. Kubatanidza mahedhifoni newadhi, zvese zvaunofanirwa kuita kutsvedza kubva kunze kwewachi kumusoro kubva pasi kuratidza panhare yekutonga kwatinogona kudzvanya icon kuti titumire odhiyo kuAirPods.
Patinodzvanya paAirPods, tinokwanisa kubaya pachiratidziri chekare icon yebhatiri rakasiiwa neApple Watch kuti itiratidze chinovhenekera chatinoziviswa nezve bhatiri rakasiiwa neese mahedhifoni. Panyaya yeApple Watch, iwe unogona chete kuona kuchaja kubva kune mahedhifoni uye kwete kubva kune iyo kesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Maitiro ekuziva iro bhatiri reti maAirPod ako kubva kuApple Watch
Musi waFebruary 5 dzimbahwe repasi rese reTunes richava muIreland